न्यूज सञ्जाल: » प्रम रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ऋण लिइँदै
प्रम रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ऋण लिइँदै
न्यूज सञ्जाल १४ श्रावण २०७६, मंगलवार ०८:५८
काठमाडौँ- बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ ।
‘हामीले अधिकतम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु छ । त्यसको खर्च आन्तरिक स्रोतले धान्दैन । ठूलो परिमाणको स्रोत चाहिन्छ’, उनले भने, ‘यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले पुग्दैन । विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागेका हौं ।’ नेपाली युवाले देशमा काम गरेको हेर्न नचाहनेहरूले यसको आलोचना गरिरहेको मन्त्री विष्टको आरोप छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण नलिन श्रम र अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च सरकारी अधिकारीले सरकारलाई सुझाएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अर्थ र श्रम मन्त्रालयका केही अधिकारीले ऋण लिनु हुँदैन भन्ने सुझाएपछि वार्ता टोली गठन भएको हो’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘वार्ता टोली गठन र उसले वार्ता गर्ने विषय औपचारिकता मात्रै हुन् । ऋण लिने निश्चित जस्तै छ ।’ अर्थ, कानुन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहने वार्ता टोलीले सरकारबाट सुझाव लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा ऋण रकम स्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ ।
‘यस्तो कार्यक्रममा ऋण लिने चलन छैन’, उनले भने, ‘ठूला लगानीका आयोजना वा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने कार्यक्रममा मात्रै ऋण लिने हो । त्यसकारण यस्ता कार्यक्रममा ऋण लिन हुँदैन ।’ लिइहाले पनि यसको लाभ र लागतका विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘निश्चित समयपछि साँवाब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदा हुने प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि ऋण लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमलाई होइन ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्च संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीबाटै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म करिब डेढ लाख जना संलग्न रहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ ।कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा केही दिनमै विवरण सार्वजनिक गर्ने उसको तयारी छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा युवालाई रोजगारीमा लगाउने र त्यसको भुक्तानी सरकारले गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । तर यो प्रक्रियामा धेरै दुरुपयोग भएको भन्दै पहिलो वर्ष नै आलोचित बनेको छ । रोजगारी सिर्जनाको योजना तुहाउन चौतर्फी हमला भइरहेको मन्त्री विष्टले बताए । ‘चीन, अमेरिका जस्ता देशको प्रमुख एजेन्डा रोजगारी सिर्जनाको छ । हामीकहाँ भने रोजगारीका कार्यक्रम कहिल्यै सिर्जना नहोउन् भनेर हमला भइरहेको छ’, उनले भने ।
विश्व बैंकले ऋण दिए उक्त रकम रोजगारमा संलग्नहरूलाई ज्याला, तलब तथा उस्तै परे बेरोजगारहरूका लागि निर्वाह भत्ता दिनेसम्मको तयारी सरकारको छ । यसैमा श्रम र अर्थका केही उच्च अधिकारीले विमति राखेका हुन् । यस्ता कार्यक्रमलाई पनि ऋण लिन सकिने तर प्रभावकारिताको विषय गहिरो गरी हेरिनुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको धारणा छ । ‘राम्रो कार्यविधि बनाएर यस्ता कार्यक्रमलाई ऋण लिनु नराम्रो होइन’, उनले भने, ‘तर यो कार्यक्रमको एक वर्षको अवस्था हेर्दा कुनै हालतमा ऋण लिन हुँदैन । झार उखेलेर, बाटो सफा गरेर बजेट सकियो ।’
सामान्य काममै गत वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ सकिएको खनालको धारणा छ । ‘कत्ति पनि रोजगार नभएका र कुनै आम्दानीको स्रोत नभएका व्यक्तिलाई रोजगार बनाउनुपर्ने हो । तर केही घण्टा काम गरेको व्यक्तिलाई भुक्तानी दिएर बजेट सकियो’, उनले भने ।
यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि ऋण लिने हो भने नेपाली जनतालाई भार बोकाउने काम मात्र हुने खनालले बताए । ‘खुद रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने ऋण तथा अनुदानबाट पनि कार्यक्रम गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित काम लगाउन यस्ता कार्यक्रम ठीकै छन् । तर अहिलेको अवधारणाअनुसार नै गर्छु भनेर ऋण मागे विश्व बैंकले दिँदैन पनि होला ।’
युवा जनशक्तिलाई सीपसँग जोड्ने र जनशक्ति उत्पादन गर्न ऋण रकमको कार्यक्रम लागू गरिने मन्त्री विष्टले बताए । ‘कार्यक्रमको प्रारूप तयार पार्न बाँकी छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे हामी सचेत छौं,’ उनले भने । पर्याप्त छलफल गर्ने र प्रतिफल दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन ऋण लिन लागिएको उनले बताए । ‘यो ऋणको ब्याजसमेत सामान्य छ । जनशक्तिलाई थप सीपयुक्त बनाउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम बनाएर मात्र ऋण लिने हो’, उनले भने ।
सबै स्थानीय तहमा कहाँ-कहाँ केके काम भयो रु कति काम भयो ? भन्ने सम्पूर्ण तथ्य तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । ‘बाटोमा गाई भेटिँदा त्यसलाई समाएको फोटा सार्वजनिक गरेर आलोचना भएको विषय पनि सार्वजनिक गर्छौं’, उनले भने । त्यो फोटो कुन स्थानीय तहको हो  ? कसले सार्वजनिक गर्‍यो  ? त्यो तहमा कसले चुनाव हारेको थियो भन्ने पनि सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।
सरकारले बेरोजगारहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने भनेको तर त्यसका लागि स्रोतको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले निर्वाह भत्तासमेत दिने भनेका छौं । पहिलो वर्ष दिन सकेनौं । अब त्यसको व्यवस्था गर्छौं’, उनले भने, ‘तर हाम्रो चाहना निर्वाह भत्ता वितरण होइन, उसलाई कामसँगै जोड्नुपर्छ भन्ने हो । काम नगरी खाने बानी पार्न हुँदैन ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
२५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:४४
विराटनगरका पसल खुल्न थाले
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १४:१८
बजेटमै समेटिएको ‘कोरोना बिमा’ योजना बन्द हुने !
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:५१
आजदेखि इलामका पसल नियमित खुल्ने
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०७:५८
झापाका व्यवसायीले आगामी शनिबारदेखि सबै पसल खोल्ने
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०८:२२